မျက်နှာအချိန်နှိုင်းယှဉ် Skype ကို
Skype နှင့် Facetime နှိုင်းယှဉ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ 2020
ဇွန် 11, 2020 အားဖြင့် FaceTime လမ်းညွှန်aComment ချန်ထား
ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျအဓိပ်ပာယျအရေးပါမှုရှိပါတယ်. သငျသညျမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပြောပြရန်လိုခငျြသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဝန်ထမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရချင်ဖြစ်စေ, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်ကိုကူညီနိုင်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသော tool ကိုလိုအပ်တယ်.
ယခင်တုန်းက, အခြားသူများကိုဆက်သွယ်မေးလ်ပြုပါရန်အသုံးပြုလူတွေ, ယခုမူကားကလူကိုဗီဒီယိုချက်တင် platform များမှတဆင့်ဗွီဒီယိုကိုချတ်လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့. ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်, မြောက်မြားစွာကုမ္ပဏီများမှဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖုန်းခေါ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်း၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုတယ်လီဖုန်း apps များဖြန့်ချိခဲ့ကြ.
ဤအရာအလုံးစုံအပြန်အလှန်ဆော့ဖျဝဲတွေထဲမှာ, app နှစ်ခုကိုအမြဲကမ္ဘာ၏အာရုံစိုက်မှုကိုကိုင်ကြပါပြီ. အဲဒီနှစျခုပြိုင်ဆိုင်မှု apps များကျယ်ပြန့်မျက်နှာအချိန်နှင့် Skype ကိုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်.
စိတ်ဝင်စားစရာ, နှစ်ဦးစလုံး apps များ (မကျြနှာကိုအချိန်နှင့် Skype ကို) အာဏာပိုင်များဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများသည်လူမှုရေးအရတက်ကြွရရှိရန်သောတူညီသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်, အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသားမက်ဆေ့ပြုပါ, အုပ်စုတစ်စုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အများကြီးပိုလုပ်.
သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများပေါ်တွင်ဤအ apps များကိုသုံးနိုင်သည်, တက်ဘလက်, ဒက်စ်တော့, ပြတင်းပေါက်, ဆွေးနွေးချက်လက်ပတ်နာရီ, iPod နှင့်အများအပြားကပို.
ဤရွေ့ကား video chat apps များကြောင့် astoundingly လွယ်ကူသောအားလုံးအသုံးပြုသူများသည်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလဒေသစက္ကန့်အတွင်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့အတှကျအရာ၌ခန့်ထားပြီ, အကွာအဝေးသို့မဟုတ်အချိန်. သူတို့ကသင့်ရဲ့မိသားစုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတည်းခိုဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ပျော်မွေ့သို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အဘို့အရာ၌ခန့်ထားပြီ, န်ထမ်းသို့မဟုတ် client များ. နှစ်ဦးစလုံး apps များအလွန်အမင်းခရီးဆောင်များမှာ, ဖော်ရွေခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖောက်သည်.
သို့သော်နေဆဲ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ထိုအ app များကိုခွဲခြားထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ features တွေရှိပါတယ်. ဤဆောင်းပါး၌, သငျသညျယှဉ်ပြိုင် features တွေ၏အသေးစိတ်စိတ်ကူးရကြလိမ့်မည်, လိုက်ဖက်မှု၏အဆငျ့, ပေါင်းစည်းမှု, နှင့် Skype နဲ့မျက်နှာအချိန်နှစ်ဦးစလုံး၏အရည်အသွေး. ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်စံနမူနာသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော software ကိုဝတ်စုံဆုံးဖြတ်ပါစေပါလိမ့်မယ်.
0.1 Skype ကိုအကြောင်း:
0.2 Skype ကို၏ compatibility:
1 Skype ကို၏အင်္ဂါရပ်များ
1.1 Skype ကို၏ပေါင်းစည်းမှု
1.2 Skype ကို၏အရည်အသွေး:
1.4 မျက်နှာအချိန် compatibility:
2.2 မျက်နှာအချိန်အရည်အသွေး Feature ကို:
2.3 ငါ့ site ကနေပို
အများဆုံးပျံ့နှံ့ဆုံးနှင့်တောင်းဆိုမှုများ video conferencing app များအနက် Skype ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဒီ app ကိုစပိုင်းတွင်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2003 နှင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် 2011 Microsoft ကကုမ္ပဏီကဝယ်. မိုက်ကရိုဆော့ဖ၌ဤသဘောတူညီချက်လုပ်ခဲ့တယ် $8.5 ဘီလီယံအထိ. ဒီဆော့ဗ်ဝဲ၏အခြေခံအယူအဆသည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်န့်အသတ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီအပြင်, Skype ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စတစ်ကာများနှင့်အတူစာသားမက်ဆေ့ခ်ျသည်၎င်း၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း. Skype ကိုအမြဲက၎င်း၏ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်. ၎င်း၏အကျိုးရှိစွာရလဒ် oriented ရလဒ်များကိုမှ, Skype ကိုကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်.
အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၎င်း၏အဆင့်မြင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်အတူ, Skype ကိုနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု၏ရှယ်ယာအများစုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်. ဤအရာအလုံးစုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, Skype ကိုကွဲပြားခြားနားသောတရားရုံးတရားခွင်နှင့်စာစောင်များကိုအတွက်၎င်း၏အမည်ကိုအောင်ကိုအောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်.
Skype ကို၏ compatibility:
Skype ကို၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒီ app အများအပြား device များအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်. ဒီ video conferencing app ကိုသုံးနေစဉ်သင်ကကန့်သတ်ထားဆက်လက်တည်ရှိဖို့ရှိသည်ပါဘူး. Skype ကို၏ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမိုဘိုင်းဖုန်းများအပါအဝင်အားလုံး devices များထည့်သွင်း, ပြတင်းပေါက်, ကွန်ပြူတာများ, တက်ဘလက်, နှင့်အခြားဂိမ်းပလက်ဖောင်း devices များ.
၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်မှုကြောင့်, Skype ကို Sony က၏မြောက်မြားစွာဖောက်သည်ရှိပါတယ်, ဘူတာ Play, စမတ်ဖုန်း, ပြတင်းပေါက်, OS X ကို devices များ, အန်းဒရွိုက်, ဘလက်ဗယ်ရီသီး, Symbian, Samsung ကစမတ်တီဗီ, စသည်တို့ကို.
အစပိုင်းတွင်, Skype ကိုက၎င်း၏ဖောက်သည်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု option ကိုပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်. သို့သော်မြင့်သောဝယ်လိုအားနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအပြီး, ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာ instant messaging နှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုရာပူဇော်သက္ကာကိုစတင်.
မျက်နှာအချိန်မတူဘဲ, Skype ကိုသာအွန်လိုင်းဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါ. ဒါဟာသင်ကြိုးဖုန်းသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုအပေါ်မည်သူမဆိုဖုန်းဆက်ဖို့ခွင့်ပြု. အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်သို့မဟုတ်နှေးကွေးသည်အဘယ်မှာရှိဒီ feature လူအားလုံးရောက်ရှိရန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်.
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံခေါ်ဆိုမှုများအတွက်, Skype ကိုဘာမှအားသွင်းမ. သင်တို့မူကားတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရေအတွက်ကအပေါ်ကိုပဌနာချင်တယ်ဆိုရင်, မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဟုတ်ကြိုးဖုန်းအရေအတွက်ကို, ထို့နောက်သင်တစ်ဦး subscription ကိုအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်. Skype ကိုအော့ဖ်လိုင်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ပေးသွင်းပြီးရဆွဲဆောင်မှုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း.
အဆိုပါနှုန်းထားများသင်၏ဒေသနှင့်ငွေကြေးအပျေါမှာမူတည်ကွဲပြား. ကျနော်တို့ Skype ကိုကြိုးဖုန်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်သို့သော်သုံးသပျနိုငျ, ဒီ app က၎င်း၏အစားထိုးအဖြစ်ပြုမူလို့မရပါဘူး. သငျသညျ Skype ကိုမှတဆင့်အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမပွုနိုငျသည်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ.
Skype ကိုသက်ဝင်စေဖို့, သငျသညျကို Wi-Fi ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်သင့်ဆယ်လူလာကွန်ရက်က data တွေကိုဖြစ်စေသုံးနိုငျ. Skype ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့, သင်သည်သင်၏ Microsoft ကအီးမေးလ်ကအိုင်ဒီသို့မဟုတ် Skype ကို ID ကိုရှိရမည်. သင်သည်သင်၏ Skype ကိုအကောင့် login ပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့, သငျသညျပြီးသားဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသောစာရင်းကိုအဆက်အသွယ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သင်ရုံသင်ခေါ်ဆိုလိုသောအသုံးပြုသူကို click ရန်ရှိသည်. သငျသညျရှာဖွေရေး bar မှာသူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်အားရေးသားခြင်းအားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအအဆက်အသွယ်မဆိုဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအကြိုက်ဆုံး၌သူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်တဲ့လူသုံးအများဆုံးအဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုစေနိုင်သည်.
သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွင်း, Skype ကိုစကားအခေါ်ဆိုမှုအပါအဝင်မျိုးစုံ option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထား, switch ကိုကင်မရာ, အသံသာ mode နဲ့ခေါ်ဆိုမှုအဆုံးသတ်. Skype ကိုလည်းယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အလွန်အပြန်အလှန်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုမကယ်မလွှတ်.
privacy ကိုများအတွက်, Skype ကိုသင်အဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ခွင့်ပြု. ဒီအပြင်, သငျသညျသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏မသိရပါဘူးလျှင်လည်းမဆိုသုံးစွဲခြင်း၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုတောင်းဆိုမှုကိုလျစ်လျူရှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုထား.
သင်တစ်ဦး OS X ကိုအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်က iOS အသုံးပြုသူတွေဟာဖြစ်စေ; သငျသညျ Skype ကို အသုံးပြု. သင့်လိပ်စာစာအုပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရယူနိုင်ပါတယ်. Skype ကိုသင်လိုချင်မည်သည့်အရေအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု forward နိုင်ပါတယ်. သငျသညျ Skype ကိုအကြွေးဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသော်လည်းကိုယ်နိုင်ပါတယ်. Skype ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများကတစ်ခုတည်း software ကို အသုံးပြု. ချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့် video conferencing ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, Skype ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုအရည်အသွေးကောင်းမပူဇော်ဘူး. တခါတလေ, သငျသညျမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနေသည်လျှင်ပင်, သင်ဆဲအနိမ့် resolution ကိုရင်ဆိုင်ရနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်း Skype ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားရင်ဒါတွေကပြဿနာများကို ပို. ပင်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်. အမှန်တကယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်, Skype ကိုအားလုံး devices များရန်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နှင့်သုံးစွဲသူများ၏န့်အသတ်အရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, လူတွေတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးပြဿနာရင်ဆိုင်ရ. အဆိုပါကောင်းသောအရာ Skype ကို၏အသင်း clients များစိတ်ကျေနပ်မှုရစေဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်.
မကျြနှာကိုအချိန်အမြဲယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုသောထင်ရှားတဲ့ဆော့ဖျဝဲတစျခုဖွစျပါသညျ. ဤဗီဒီယိုအားတယ်လီဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲကို Apple ကစတင်ခဲ့သည် 2011. ဒီဆော့ဗ်ဝဲသီးသန့်အိုင်ပက်အပါအဝင် Apple က device ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်, အိုင်ဖုန်း, iPod, နှင့် Macs ဗီဒီယိုနှင့်အသံ interaction ကခံစားခြင်းဖြင့် interlinked နေဖို့.
မကျြနှာကိုအချိန်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်တစ်ဦးကြီးတွေအတုံးခံစားနေသည်. စစ်တမ်းအရ, ထက်ပိုပြီး 70 သန်း OS X ကိုအသုံးပြုသူများသည်နှင့် iOS အသုံးပြုသူများကအခြားအသုံးပြုသူများမှပြောပြရန် Face အချိန်၏အကူအညီကိုယူပြီးနေကြတယ်.
သင်သာ Apple ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာဤ software ကို run နိုင်ပါတယ်. သငျသညျမျက်နှာအချိန်အားဖြင့်သင်တို့၏ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုစတင်ရန်ကင်မရာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရရှေ့ဆက်နဲ့ Mac အတွက်သို့မဟုတ်က iOS device ကိုရှိရမည်. မကျြနှာကိုအချိန် Compatibility ကိုကန့်သတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကြောင့် Apple ထုတ်ကုန်များအတွက်သာသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအောကျပါမဆိုရှိပါကသင်ဟာမျက်နှာအချိန်ကို အသုံးပြု. စတင်နိုင်ပါသည်
အိုင်ပက်2သို့မဟုတ်နောက်မှ,
iPhone ကို4သို့မဟုတ်နောက်မှ
4ကြိမ်မြောက်မျိုးဆက် iPod သို့မဟုတ်နောက်မှ
Mac OS X မှာ 10.6.6 နောက်ပိုင်းတွင်
အမှု၌သင်တို့၏ devices များအနေနဲ့ In-built ကင်မရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ပြီးနောက်သင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပို့ချစတင်ရန်ပြင်ပကို web camera ကို attach ရမယ်.
အစပိုင်းတွင်, မကျြနှာကိုအချိန်က၎င်း၏ဖောက်သည်များသာ Wi-Fi ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသော်လည်းကိုယ်ခွင့်ပြု. သို့သော်နည်းပညာ၏တိုးတက်မှုနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ, ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာဒေတာဆယ်လူလာကွန်ရက်များ အသုံးပြု. ဒီ app ကို run ရန်၎င်း၏ client များခွင့်ပြုထားပါတယ်.
မျက်နှာအချိန်တစ်ခုမှာယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်, Skype ကိုမတူဘဲသင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားပါရန်မလိုပါ. သငျသညျမျက်နှာအချိန်ကိုစတင်သုံးစွဲပြီးတာနဲ့, အလိုအလျောက် iOS နှင့် OS X ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်လိပ်စာစာအုပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်အားလုံးလိုအပ်သောဒေတာများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် synchronizes.
မကျြနှာကိုအချိန်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်. သင်သည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါ, သငျသညျ switch ကိုကင်မရာအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအသုံးဝင်သော options များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, မိုက်ခရိုဖုန်းအသံပိတ်သို့မဟုတ်သင့်ခေါ်ဆိုခကိုအဆုံးသတ်. Apple က Skype ကိုကျင့်သော၎င်း၏ဖောက်သည် VOIP ဝန်ဆောင်မှုများကိုမပူဇော်ဘူး.
Apple ကဗီဒီယိုကတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်က high-performance ကို software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ဖို့အစွန်းရှိပါတယ်. မကျြနှာကိုအချိန် "တစ်ဦးချစ်ပ်ပေါ်မှာ system ကို" A-စီးရီးတွေနဲ့ရလဒ်တွေကိုပေးစေခြင်းငှါဒီဇိုင်းနှင့် iSight Camera တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်. ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ထိပ်တန်းရလဒ်များကိုပေး, မကျြနှာကိုအချိန်မဆိုအနိမ့် bandwidth ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလည်ပတ်ပါဘူး.
Apple ကအမြဲ၎င်း၏ဖောက်သည်ဖို့ပရီမီယံအရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားပြောင်မြောက်ရလဒ်-oriented app များကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ခဲယဉ်းကြိုးစားထားပါတယ်. မကျြနှာကိုအချိန်မှာလည်း Apple က၏တူညီသောအတွေးအခေါ်နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, သင်သည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်းဆင်းရဲသားကိုဗီဒီယိုကအမှားအယွင်းများနှင့်စကားသံကိုပေါက်မရနိုငျ. မကျြနှာကိုအချိန်က Apple ၏ကမ္ဘာ၏ဂေဟစနစ်အရသိရသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်.
မျက်နှာအချိန်အရည်အသွေး Feature ကို:
Apple ကအမြဲသူတို့ပူဇော်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုအရည်အသွေးနှင့်ထူးချွန်အပေါ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ထားပါတယ်. ဤသည်မျက်နှာအချိန်က၎င်း၏ပြိုင်ဘက် Skype ကိုထက်အရည်အသွေးကောင်းရှိပါတယ်ကြောင့်သောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်. မကျြနှာကိုအချိန်ကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း.
ဗွီဒီယိုနဲ့အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်, မကျြနှာကိုအချိန်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ပေးပါသည်, မပြတ်မတောက်, ချောမွေ့ရွေ့လျားမှုနဲ့အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံနှင့်တက်ကြွရုပ်ပုံလွှာ.
မျက်နှာအချိန်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ app ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများလှပသောစေရန်သင့်အားခွင့်ပြုထား, အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့နဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများသိရှိစေရန်.
သငျသညျဖျောပွဖို့တကယ့်အရေးကြီးဆုံးအရာရှိသည့်အခါစဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းဆက်သွယ်ရေးလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်, သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုပေးချင်သို့မဟုတျသငျ့ရောင်းချရန်အစေးနှင့်သင်၏ client ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းချင်နှင့်စာရင်းအပေါ်သွားသည်.
မကျြနှာကိုအချိန်နှင့် Skype ကို, နှစ်ဦးစလုံးသည်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပို့ချဘို့မယုံနိုင်စရာ apps များဖြစ်ကြသည်. သငျသညျကို Apple device ကိုတစ်အသုံးပြုသူဖြစ်ကြပြီးသင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်လျှင်သင်သည်မျက်နှာအချိန်အသုံးပြုရမည်.
ဆန့်ကျင်, သငျသညျက Apple devices များလောကီသားတို့သည်အပြင်ပလူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်နေရလိုလျှင်ထို့နောက် Skype ကိုသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးပြတ်သားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
ငါ့ site ကနေပို
Android ဖုန်းတွင် Skype အသုံးပြုနည်း
Facetime ကို i-Pad တွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်
Mac တွင် Facetime ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း
PC မှာ Facetime ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးအသုံးပြုနည်း
အောက်မှာ Filed: FaceTime Download